Industrial Furnace Heat Therapy Vagadziri & Vatengesi | China Industrial Vira Rekupisa Kurapa Fekitori
Graphite kudziyisa ndiro
Graphite ine hunhu hwakanaka hwekupisa kwakanyanya kupisa uye kupisa conduction, uye yakanaka kupisa sosi. Graphite jira rinodziyirwa ne conduction, inova ndiyo nzira huru yekushisa kwakanyanya kwevira kupisa.
Graphite kudziyisa tsvimbo
Kune anopfuura makumi maviri marudzi e graphite zvikamu muCZ yekupisa munda, ine zvinhu zvehunhu uye kugadzira tekinoroji zvine simba rakakura pahunhu hweiyo imwechete kristaro. Isu tinoshandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zve graphite zvine simba rakakwira, kushandiswa kwepasi, chimiro chakanakisa, yunifomu yemuviri uye yemakemikari zvivakwa kugadzira mhando dzakasiyana dzemunda wekupisa uye zvikamu, saka zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro.
Graphite zvikamu zvekutsvaira choto
Mukugadzirwa kwekutsvaira kwechoto, graphite zvinhu zvakahwina musika wakakura wekushandisa nekuda kwayo yakasarudzika maitiro. Iyo graphite zvikamu pamoto wekutsvaira unosanganisira: kupisa kuputira kabhoni akanzwa, girafu yekudziya tsvimbo, graphite chira yemubhedha giraidhi njanji, graphite gwara girazi, graphite giraidhi tsvimbo, graphite yekubatanidza chidimbu, graphite mbiru, girafu giravhiti yemubhedha rutsigiro, graphite sikuru, graphite nati uye zvimwe zvigadzirwa.
Graphite yakanzwa inogona kukamurwa kuita asphalt-based graphite yakanzwa, polyacrylonitrile-based (PAN-based) graphite yakanzwa uye viscose-based graphite yakanzwika nekuda kwesarudzo dzakasiyana dzepakutanga kunzwa. Iko kushandiswa kukuru kwe graphite kwakanzwika sekupisa kwekudziya uye kupisa kwekupisa zvinhu zveimwe chete kristaro yesilicon inonyorova vira. Inogona kushandiswa sefaera zvinhu zvepamusoro kuchena kunokanganisa kemikari reagent mune kemikari indasitiri.
Mucheka wekabhoni wakarukwa uye wakarukwa neiyo polyacrylonitrile base (PAN) kabhoni fiber, iyo yakakamurwa kuva kupisa kabhoni jira, yekupisa yekuvhara kabhoni jira, uye yakasimbisa uye kuomesa jira rekabhoni. Inogona zvakare kutorwa senge inosimbisa iyo kabhoni / kabhoni inosanganiswa zvinhu.
Industrial vira kupisa kupisa kurapwa
Industrial vira rudzi rwemidziyo inoshandisa kupisa kwakashandurwa nemagetsi simba kupisa zvinhu kana basa-zvidimbu mukugadzirwa kwemaindasitiri. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira uye kuyedza kwekeramiki, simbi, zvemagetsi, girazi, indasitiri yemakemikari, michina, inokanganisa, nyowani yekuvandudza zvinhu, zvakasarudzika zvekuvakisa, zvekuvakisa, mayunivhesiti uye ekutsvagisa masangano.